Synoda lehibe FJKM any Manakara – aogositra 2012 – FJKM Ambavahadimitafo Synoda lehibe FJKM any Manakara – aogositra 2012 |
Synoda lehibe FJKM any Manakara – aogositra 2012
Publié le 20 août 2012 à 08:08
Nosokafana ny 15 Aogositra 2012 tany Manakara ny Synoda Lehibe faha-17 an’ny FJKM.
Ao aorian’ny fanokafana dia hotanterahina ny fifidianana ny Birao hitarika ny fivoriana hatramin’ny 22 Aogositra 2012. Ireo olona voafidy ho Birao dia hitarika ny Synoda ihany fa ny Biraon’ny FJKM mandritry ny efa-taona dia ny 22 Aogositra no ahafantarantsika izany.
Ny lohahevitra dia ny hoe « Ny fanantenana no namonjena ny mino » Romana 8:24
Ny lahateny fanokafana ny fampianarana dia ny hoe « Ny fanantenana araka ny foto-pinoana reformé », hoentin’ny mpitandrina Dr Rakotoniera Christian Eric.
Ny manaraka dia » Ny Fanantenana sy ny fiainam-pirenena », hoentin’ny Pasitera Zarazaka Jean Louis.
Avy eo dia ny lohahevitra hoe « Fanantenana sy ny ftondram-piangonana », hoentin’ny mpitandrina Randriamampionona Alfred sy ny « Fanantenana sy ny asa fitoriana ny Filazantsara », hoentin’ny pasitera Randriamisaina Landison Triomphe.
Ireo dia samy hotanterahana ny alakamisy 16 Aogositra mialoha ny fivoriana rehetra satria ny fampianarana avy amin’ny Soratra Masina no fotokevitry ny Synoda Lehibe iray manontolo.